400W LED Beam Spot ဆေးကြောခြင်း 3IN1 Moving Light CMY နှင့်အတူအလင်း
7X40W RGBW Zoom ရွေ့လျားမှုအလင်းရောင်
260Head Light Moving W 9R Beam Plus
150W Beam အစက်အပြောက် 3in1 LED Moving Head Light ကို LED
28x25W အမြင့်တောက်ပသော LED ZOOM Moving Head Light
ချစ်ခင်ရပါသောဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဆွေများ, အားလုံးမင်္ဂလာပါ, ကုမ္ပဏီ၏ကုမ္ပဏီပုံရိပ်ကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်, စက်မှုလုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်တည်ထောင်ရန်, အမှတ်တံဆိပ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးတက်လာသည်, နှင့် LOGO အမှတ်တံဆိပ်၏အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်, ငါတို့ကုမ္ပဏီ LOGO အသစ်ဒီဇိုင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်. LOGO အမှတ်တံဆိပ်၏မူကွဲအသစ်ကိုယခု မှစ၍ စတင်မည်, ကုမ္ပဏီ၏မူလ LOGO …
MEGA PRO LITES ဝဘ်ဆိုက်ကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ပိုကောင်းတဲ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်, MEGA PRO LITES ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယခု မှစ၍ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလိမ့်မည်. ထုတ်ကုန်အချက်အလက်အချို့ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းကာလအတွင်းအချိန်မဆွဲပါ, သင်၏စုံစမ်းရေးနှင့်စာဖတ်ခြင်းအတွက်အဆင်မပြေမှုဖြစ်စေသည်, ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ! MEGA LED LIGHTING LIMITED 2020.04.18
1. အမျိုးမျိုးသောဆီမီးခွက်ထိန်းချုပ်မှု Modes သာ Spotlight, အလင်းပြန်လာ, ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတပြင်အလင်း, ပုံရိပ်အလင်း, စသည်တို့. စားပွဲပေါ်မှာမှိန်ခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားကြသည်; Computer lamp and dye lamp ကို computer lamp console မှထိန်းချုပ်သည်; ချိန်ညှိသုံးမူလတန်းအရောင်ပျော့အလင်း (အအေးအလင်း) စားပွဲပေါ်မှာမှိန်ခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်; မညှိနိုင်သောသုံးမူလတန်းအရောင်ပျော့ပျောင်းသောအလင်းရောင် (အအေးအလင်း) ချမ်းသည်။
စင်မြင့်အလင်းကိုမျက်နှာပြင်အလင်းအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်, နားအလင်း, ထိပ်တန်းအလင်း, ကော်လံအလင်း, ဘေးထွက်အလင်း, ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအတန်း, ခြေထောက်အလင်း, စသည်တို့. အပြင်အဆင်နှင့်အသုံးပြုမှုအရသိရသည်. မျက်နှာပြင်အလင်းကိုစင်မြင့်ကုလားကာအထက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်, အဓိကအားဖြင့်စင်မြင့်၏ရှေ့မှောက်၌စွမ်းဆောင်ရည်areaရိယာရန်, ပုံမော်ဒယ်လ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများ၏သုံးဖက်မြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံဖော်သည်။
စင်မြင့်အလင်းပစ္စည်းကိရိယာများ၏တစ် ဦး ကဇာတ်စင်အလင်းပြောင်းလဲမှု, အနှစ်သာရအတွက်, စင်မြင့်အလင်းလှည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. စင်မြင့်အလင်းရောင်အပေါ်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၌တည်၏, စင်မြင့်အလင်း၏ပြောင်းလဲမှုအမှတ်ဂရုစိုက်ဖို့အပြင်, ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုစီရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုဆက်သွယ်ဖို့ပိုပြီးအာရုံစိုက်သင့်တယ်, နှင့်အဓိပ္ပာယ် ...
Mega LED Lighting Ltd., ထူထောင် 2006, R&D ကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာအလင်းရောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, နှင့်ရောင်းအား. အဆိုပါကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းanရိယာဖုံးလွှမ်း 5,000 စတုရန်းမီတာ, ရုံးခန်းနှင့်အလုပ်ရုံအဆောက်အ ဦး နှစ်ခုရှိသည်, ပြခန်းကြီးတစ်ခု,6စမ်းသပ်လိုင်းများ ......
Guangdong ICP အမှတ် 14030531
တယ်လီ:+86-20-37294926 / 37294936
အမှတ် ၉၊ Dayang လမ်း,Mingzu ကျေးရွာ,Tanbu မြို့, Huadu ခရိုင်, Guangzhou City,တရုတ်.